Inona no dingana hanamboarana ny boaty fanomezana anao manokana
avy amin'ny admin tamin'ny 20-08-17
Ny famonosana marika tsy miankina dia nanjary sy sehatra mahazatra amin'izao fotoana izao, manomboka amin'ny orinasa goavambe ka hatramin'ny orinasa kely, samy te-hanangana ny lazan'ny orinasany avy izy ireo amin'ny alàlan'ny famonosana azy. Satria ny fonosana no fomba mora indrindra sy mora indrindra ary manaparitaka haingana hanatrarana ny tanjona. Androany, nandritra ny 10 taona niainana taratasy p ...
Raha toa ka biodegradable na eco-friendly ny fonosanao
Nanjary fironana ny namana ara-tontolo iainana ankehitriny, maro kokoa ny olona miahy azy isan'andro, satria miatrika loza mitatao vokatry ny fanimban'ny tenantsika voajanahary isika. Ho anay, amin'ny maha-mpanamboatra boaty fonosana antsika, dia matetika no anontaniana ianao raha mety ho simba ny vatanao? Andao aloha hojerentsika izay atao hoe biodegrada ...
Ahoana ny famolavolana boaty manintona
Ny fonosana dia misy fiarovana ho an'ny vokatra anatiny, na izany aza, miaraka amin'ny fampandrosoana ny toekarena manerantany, ny fonosana dia tokony hanome lanja fanampiny. Mba hisongadinana eo amin'ny tontolon'ny mpanjifa ankehitriny, tokony hahatratra ny "wow factor" ianao, izay mahatonga ny famolavolana fonosana ho zava-dehibe indrindra. Fa ny fomba famolavolana ...